10-နည်းနည်းနံပါတ်ထို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးကတ်၏ 8-bit နဲ့နံပါတ်ကူးပြောင်းခြင်းဆက်ဆံရေး, Access Control Smart ID Card, RFID ID Card, စမတ် IC Card ကို, Seabreeze စမတ်ကဒ် Co. , Ltd မှ.
 » ဘလော့
Access Control Smart ID CardRFID ID Cardစမတ် IC Card ကို
ပုံမှန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, 8-bit နဲ့ကဒ်အရေအတွက်က wiegand26-bit မှာ output ကိုဖြစ်ပါတယ်, 10-bit မှာကဒ်အရေအတွက်က wiegand34-bit မှာ output ကိုဖြစ်ပါတယ်.
213 02000 3+5 8-နည်းနည်းကဒ်အရေအတွက်က.
10-နည်းနည်းကဒ်အရေအတွက်က 0013961168, hexadecimal ဖို့ဖြစ်ပါတယ် convert 00 D5 07 D0.
8-နည်းနည်းကဒ်အရေအတွက်က 213 02000, ပထမဆုံး3ဂဏန်း 213 hexadecimal မှပြောင်းလဲ D5 ဖြစ်ပါသည်, ပြီးခဲ့သည့်ငါးဂဏန်း 02000 hexadecimal ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကူးပြောင်း 07 D0.
ထိုကွောငျ့, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတွေ့နိုင်ပါသည်: ပဌမ, hexadecimal ရန် 10-ဂဏန်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါသည်4bytes, ပထမဦးဆုံးက byte မလိုအပ်ပါဘူး, ဒုတိယက byte ကိုပထမဦးဆုံးပြောင်းလဲနေသည်38-bit နဲ့ကဒ်နံပါတ်ဂဏန်း, တတိယနှင့်စတုတ္ထအဆိုပါ bytes ကနောက်ဆုံးသို့အတူတကွကူးပြောင်းနေကြသည်58-bit နဲ့ကဒ်နံပါတ်ဂဏန်း.
Excel ကိုပုံသေနည်း =(ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး(X ကို,256*256))+(ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး(INT(X ကို /(256*256)),256)*100000).
ဒါဟာ access ကိုထိန်းချုပ်တက်ရောက်သူ system ထဲမှာ 10-bit နဲ့ကဒ်အရေအတွက်သည်တစ်ဦး algorithm ကိုက 8-bit နဲ့ကတ်နံပါတ်သို့ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်သောအထက်မှမြင်နိုင်ပါသည်, နှင့် 8-bit နဲ့ကဒ်အရေအတွက်က 10-bit မှာကဒ်အရေအတွက် restore လုပ်ဖို့ခက်ခဲသည်.
Seabreeze စမတ်ကဒ် Co. , Ltd မှအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ထုတ်လုပ် access ကိုထိန်းချုပ်တက်ရောက်သူစနစ်များအများစုမှာ wiegand26 နှင့် wiegand34 နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြ, နှင့် software များမှာလည်းလွတ်လပ်စွာ 8-bit နဲ့ကဒ်နံပါတ်သို့မဟုတ် 10-bit နဲ့ကဒ်အရေအတွက်ကစစ်ဆင်ရေးရှေးခယျြနိုငျ.
နောက်တစ်ခု: RFID frequency နဲ့ Transmission ပါဝါ